Arsenal Ayaa Weli Xiiseyneysa Emiliano Buendia
HomeHoryaalka IngiriiskaArsenal ayaa weli xiiseyneysa Emiliano Buendia
January 25, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Norwich City Emiliano Buendia ayaa lagu soo waramayaa in uu wali bartilmaameed u yahay kooxda Arsenal .
Gunners ayaa qarka u saaran inay heshiis amaah hal xilli ciyaareed ah kula soo saxiixato kubadsameeyaha Real Madrid Martin Odegaard , taasoo soo afjaraysa rajo kasta oo macquul ah oo ay ku heli laheyd Buendia bisha Janaayo.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay football.london , Mikel Arteta iyo agaasimaha farsamada Edu ayaa wali doonaya inay ugu dambeyn la saxiixdaan Buendia.
Norwich ayaa la sheegayaa inay ku dalbaneyso aduun dhan m 40m si ay u hesho laacibka reer Argentina, kaasoo ka qeyb qaatay 7 gool iyo lix caawin Championship xilli ciyaareedkan.
Buendia wali wuxuu heystaa seddex sano iyo bar qandaraaskiisa, taasoo ka dhigeysa in Canaries ay ku jirto boos adag oo la xiriira mustaqbalkiisa.